एनआरएनएले ८ करोडको बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने
जापान । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले एनआरएनए कल्याण कोष स्थापना गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । संघको आइतबार सम्पन्न पदाधिकारी बैठकले कोषाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेटेर एक समिति गठन गरेको संघका महासचिव डा. हेमराज शर्माले जानकारी दिए ।
‘एनआरएनए कल्याण कोष’ को स्थापना गरी उक्त कोषमा वार्षिक ८ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्दै जाने ठोस योजनासहित कार्य अगाडी बढाउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको हो । बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने कमिसनको केही अंश सो कोषमा जम्मा हुँदा वार्षिक ८ करोड रुपैयाँ संकलन हुने संघको अनुमान छ ।
नवगठित समितिमा अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, अध्यक्ष बैंकिङ्ग एशोसियसन्, अध्यक्ष, नेपाल रेमिट्यान्स एशोसियसन, संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसी, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री, चिरन्जीवी थापा र सदस्य सचिवमा अनल भट्टराई रहेका छन् ।
यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा गठित कोविड–१९ राहत कोषको उपसमिति विस्तार गरिएको संघका उपाध्यक्ष सोनाम लामाले जानकारी दिए । संघको परोपकार तथा राहत विभागका प्रमुखसमेत रहेका लामाले कोरोना महामारीको लागि आर्थिक संकलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई समेत परिचालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । संघका कोषाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजत्वमा गठित सो समितिको उपसंयोजकमा गौरी जोशी, आरके शर्मा, लोक दाहाल छन् ।
यस्तै समितिको सदस्यहरुमा राजन त्रिपाठी (अमेरीका), नारायण आचार्य (युरोप), रविन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, प्रविन गुरुङ, होमनाथ पाण्डे, रोशन थापा छन् । संघका सबै राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरु सो समितिको पदेन सदस्य रहने छन् ।
अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना भाइरसबिरुद्ध लड्न नेपाल सरकारलाई १ करोड ६० लाखको भौतिक सामग्री सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रामेछापमा विदेशबाट आउनेलाई सामुदायिक क्वारेन्टिन र होटल ब्यवस्था
ई–सेवाको जापानबाट रेमिट्यान्स सेवा सुरु
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध पुनःआन्दोलन गर्ने स्थानीय ठेकेदारको चेतावनी
एनआरएनए कतारद्धारा १४औँ चरणमा थप २१८ जनालाई राहत वितरण
गर्भवती र सुत्केरीलाई नियमित सेवा दिन अस्पताललाई मन्त्रालयको निर्देशन
टोकियोमा आज ३४ जनामा कोरोना संक्रमण,संक्रमित ५,२८३ जना पुग्यो
एघार वर्षपछि फर्किएको खुशी: माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए
मर्यादाभित्रै रहेर गतिविधि गर्न ईयूलाई कांग्रेसको सुझाव
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मिति चाँडै घोषणा गरिने
नेपाली सेनाले सैन्य कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने